«Mondial» aloha, izao | NewsMada
«Mondial» aloha, izao
Dimy andro sahady izay, ny nanombohan’ny andiany faha-21 amin’ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany «Mondial 2018», taranja baolina kitra. Fihaonana, tanterahina any Rosia. Samy mianoka sy mifantoka amin’izany avokoa, izao tontolo izao, eny fa na ny Malagasy aza, dia revo manaraka mivantana izany lalao be mpitia, indrindra, manerana izao tontolo izao.
Porofo fa tena liana amin’ity «Mondial 2018», ity ny Malagasy, ny fahitana ireo filaharambe, amin’ireny mpivarotra manao tolotra hahazoana mivantana ireo lalao 64. Miresaka azy ity avokoa na mpianatra, na mpiasa na olon-tsotra, na mpivarotra, eny fa any anaty fiarabe iombonana ireny aza, dia resaka «Mondial», ny tena henon’ny sofina sy mahaliana ny olona.
Tsy misy mpiraika intsony, izany politika sy solombavambahoaka ho an’ny fanovana sy izany praiminisitra sy filoham-pirenena, izany fa «Mondial», aloha izao.
Samy maika sy dodona avokoa ny rehetra raha vao mipaika ny ora firavana, amin’ny hariva fa hijery «Mondial». Tsy hita firy loatra ny fitohanana lavareny fa efa any an-trano avokoa ny rehetra, manaraka «Mondial».
Satrin’ny vahoaka ho “Mondial” foana mandava-taona, hanadinoana ity resaka politika, tsy hihinanan-kanina, ity. Politika efa mankaleo ny olona fa toa ny eo ihany ny eo. Aleon’izy ireo mijery “Mondial”, fa amin’iny misy zava-baovao sy mahafinaritra foana. Tsy mankaleo fa vao mainka aza, hahazoana fahafinaretana.
Ny hany mampimenomenona ny olona dia ny tsy fandefasan’ny fahitalavi-pirenena “Mondial”. Tsapa fa tena tofoka amin’ny resabe politika ny vahoaka. Na sarotra aza ny fiainana, na eo aza ny sondro-bidin’ny solika, tsy te hahalala izany ny olona fa revo, amin’ny “Mondial”.
Aleo aloha, iaina sy haka fahafinaretana ary hirevy “Mondial” fa aoriana mifampitady amin’ny politika sy ny fiainana, indray. “Mondial”, aloha izao ê!